ဒူဘိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးစိန်ခေါ် | ယူအေအီးရှိနှင့်ပြီးသားသန်း 1 ကျော်ကလူ!
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at မေလ 29, 2019
ဒူဘိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးစိန်ခေါ်မှု - သန်း 1 ကျော်ကလူပြီးသား 30 မိနစ် 30 ရက်ပေါင်းစိန်ခေါ်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ!
ဒူဘိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးစိန်ခေါ်မှု - သန်း 1 ကျော်ကလူပြီးသားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ 30 မိနစ် 30 ရက်ပေါင်းစိန်ခေါ်မှု!
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျနော်ဒူဘိုင်း၏ဦးရစ်သရဖူမင်းသားသည်သူ၏ပြေနာရီရှိတ် Hamdan ဘင်မိုဟာမက်ဘင် Rashid ကနေအများကြီးတင်ကိုမြင်လျှင် အယ်လ် Maktoumအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုသူသုံးဆယ်မိနစ်သုံးဆယ်ပတ်လုံးနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မိမိအပြေနာရီရှိတ် Hamdan ဘင်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum
ဒါဟာအတော်လေးတစ်ဦးအထင်ကြီးစိတ်ကူးခဲ့တာနဲ့ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကကြိုက်တယ်။ ငါကမဆိုအားကစားစတာတွေ play, လမ်းလျှောက်, ပြေးရတာ, လေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့လှုပ်ရှားမှုများရောနှောနှင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုမှတ်မိသည်အတိုင်းဝေးငါကလူများအတွက်တကနည်းနည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဤအချိန်အောင်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုမင်းသားမြင်ကနေအချိန် span တိုးမြှင့်ဖို့ချင်ပါတယ် 30 မိနစ် 45 မိနစ်။
ထို့အပြင်လှုပ်ရှားမှုများပြည်သူ့ဒီသုံးခုလှုပ်ရှားမှုများရှေးခယျြနိုငျလမ်းလျှောက်, ပြေးရတာ, ပြေး cardio, gymming, ယောဂ, kickboxing, ဘောလုံးကစားခြင်း, ပုရစ်, ဘတ်စကက်ဘောစသည်တို့ကိုတူသောပုံစံအမျိုးမျိုးသို့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ 15 မိနစ်သို့ခွဲနိုင်လှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုချင်းစီ။ ဒါဟာလမ်းလျှောက်ဖြစ် run, 45 မိနစ်တစ်ခုချင်းစီ 15 မိနစ်ပြေးရတာသို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်, ပြေးခြင်းနှင့်ကစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပေါင်းစပ်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား, ဇီဝြဖစ်, အသက်စတာတွေအရသိရသည်လူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးမှကွဲပြားစေခြင်းငှါ
ဒူဘိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးစိန်ခေါ်မှု 30 မိနစ် 30 ရက်ပေါင်းစိန်ခေါ်မှု
Credit: Fazza Instagram ကို
လူတွေကသူတို့အဘို့အ spreadsheet ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရှိသည်လှုပ်ရှားမှုများကိုရှေးခယျြပြီးတာနဲ့ နေ့ရက်တိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုများ။ သင်တစ်ဦးစံချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည့်အခါ, တစ်ဦးကိုနေ့စဉ်လမ်းကြောင်းသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်စသည်တို့ကို, နာရီအိပ်ပျော်နေသော, အစားအစာနှင့် ပတ်သက်. လူအရည်စားသုံးမှုဒီစိန်ခေါ်မှုဝေစုအချို့ကျန်းမာအကြံပေးချက်များပို့ချစဉ်ထောက်ပံ့ရပါမည်။ အလှည့်သွားသောသင့်လျော်သောအစီအစဉ်နှင့်ကွပ်မျက်ရှိဖွစျပါစေ ဒူဘိုင်း၏လူအကြိုးခံစားရဖို့.
ပန်းတိုင် Set ဒူဘိုင်းအတွက်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဖြစ်
ဒီလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အစီအစဉ်များကိုငါဖြစ်လိမ့်မည်သေချာဖြစ်ကြောင်းကို, စနစ်တကျဖွဲ့စည်းခံရဖို့သွားနေပါတယ်။ သူတို့မစတင်မီကနျြးမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိသူများသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များနှင့်တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမျိုးကိုလည်းမပြုမီယူသည်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြိုတင်တစ်လပြုခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်လူများဖို့ဆက်သွယ်ရေးကြိုတင်မဲအတွက်ကောင်းစွာလူကိုသွားရန်လိုအပ်ပါသည်။
လူမှုမီဒီယာများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ လှုပ်ရှားမှုများဒီလိုမျိုးမြှင့်တင် ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့သတင်းစကားဘုံလူအားရောက်ရှိနိုင်အောင်မတိုင်မီဒီသုံးပါနှင့်မြှင့်တင်ရန်မဟုတ်ပါဘူး။ မြှင့်တင်ရန်အဆိုပါနည်းလမ်းတွေကြောင့်အများကြီးဖန်တီးမှုတတ်နိုင်သမျှဖွစျပါစေကောင်းတဲ့သိုလှောင်, အသေးစားဗီဒီယိုများ, အီးမေးလ်များ, လက်ကမ်းစာစောင်များစသည်တို့ကိုတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြည်သူ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနေချိန်မှာစိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ် အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်.
အဘယ်အရာကိုစတင်များနှင့်အဆုံးနေ့စွဲကော? ဖြစ်နိုင်သည်ကထိုရက်သတ္တပတ်၏အစအဦးများတွင်စတင်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျတနင်္ဂနွေ start ဆိုပါစို့အဲဒါကိုနင်္လာမှသောကြာအပေါ်ပြီးစီးကြကုန်အံ့။ ငါရက်သတ္တပတ်၏စတင်အပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုလတ်ဆတ်တဲ့အပတ်ကဖြစ်ပါသည်, လတ်ဆတ်တဲ့နေ့နှင့်လူတွေစိတ်အားထက်သန်၏တွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးစိန်ခေါ်မှု - ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြံ့ခိုင်ရေး Group မှ Start မှ!
တစ်ဦးအုပ်စု Start: https://groups.dubaifitnesschallenge.com/
လူတွေအကြိုးကိုပေးလျှင်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်သည်, ထို့နောက်အကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါဆုလာဘ်ရုံအပေါငျးတို့သအဖွဲ့အစည်းများဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြန့်နှံ့စသည်တို့ကိုပိုက်ဆံပုံစံ, ဆုကြေးဇူးကိုဘောက်ချာ, ကျန်းမာ subscriptions ကိုအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုစက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့ကိုမြေပြင်အဆင့်ကနေမြှင့်တင်ရန်ပါစေ, အစိုးရသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါပိုကြီးအဖွဲ့အစည်းများဘဝဒူဘိုင်းလေဆိပ်အခွင့်အာဏာရှိလျှင်, အကောက်ခွန်နှင့်ယစ်မျိုးကကြီးမြတ်ရလိမ့်မည်။ အားလုံးအဓိကမောလ်များနှင့်အဓိကအရပ်တို့ကိုဖြတ်ပြီးစကားလုံးပြန့်နှံ့, ဒီအလေးအနက်ထားဒီပဏာမခြေလှမ်းကိုတက်ယူလူတွေကိုလှုံ့ဆျော။
လူအပေါင်းတို့သည်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလုံးကိုအသက်အရွယ်မရွေးလူအတန်းအစားထဲကနေတက်ကြွစွာပါဝင်မှုရှိစေလော့။ အဖြစ်ကောင်းစွာပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းကနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလုပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်လူတွေပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်နိုင်အောင်, ဖြစ်ရပ်အနည်းငယ်ပျော်စရာကိုးကားချက်ထည့်ပါ။ သူတို့ခွကေိုနေဖို့လှုံ့ဆော်ခံစားရနိုင်အောင်အသိပညာနက်ရှိုင်းသောအဟောင်းများကိုမျိုးဆက်အဖွဲ့ကိုလူများအတွင်းသို့သွားကြကုန်အံ့။
ဤရွေ့ကား 30 ရက်ပေါင်းကအခမ်းအနားကဲ့သို့ဖြစ်ကြကုန်အံ့။ တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးကိုအခမ်းအနား, ကျန်းမာသန်စွမ်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျန်းမာရေးဒူဘိုင်းမြို့။ အတူတူတင်ပြသောသောမြို့, သူတို့သည်အစဉ်အကြံထမြောက်ရသောအအတူတကွ fit ရှိနေမည်။ ပန်းတိုင်ကျန်းမာချမ်းသာဒူဘိုင်း၏အပြည့်အဝပါစေသော။ လောကဓာတ်လုံးကိုသင်တစ်ဦးကျန်းမာစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ဘဝမှာရည်မှန်းကြသည်နှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန်ကနေလူတွေကိုပိုပြီးဒူဘိုင်း၏လူဦးထံမှလေ့လာသင်ယူနိုင်မသိပါစေ။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်ကလူတွေကိုစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ကျန်းမာအသက်တာ၏တန်ဖိုးကိုနားလည်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုများအတူတကွလာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအဘို့အဂရုစိုက်ဟုတ်ကဲ့, ကကမ္ဘာကြီးကိုပြောကောင်းတဲ့ဖြစ်မယ့်ဒီအသီးအသီးအခြားအကိုစိန်ခေါ်နိုင်ပါ။
ပွဲကျင်းပလာမယ့်နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာအသက်နှင့်ကျန်းမာဒူဘိုင်း၏ဤ Saga ကိုဆက်လက်ဖွင့်လာမှအသစ်ကတစ်ခုခုကိုဆက်လက်ကြပါစို့။ သငျသညျရှေ့ကိုတဦးတည်း-Step ယူ. လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသငျသညျသငျနှငျ့အတူတလျှောက်ငါးကိုပိုခြေလှမ်းရယူပါ။ ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Duabi အဘယ်သူမျှမသေးအဖှဲအရာများအတွက်ငါဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်တဲ့ဦးတည်သွားစေကြကုန်အံ့။ တစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါးမှတ်စုတွင်ကဆေးရုံများအဘို့ကောင်းသောမဟုတ်ပေမယ်ပင်ဆရာဝန်များကိုလူများကျန်းမာနေဖို့လိုကြသည်။ ပင်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစိန်ခေါ်ဘယျအရာတခုစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ဒူဘိုင်းများအတွက်မိုင်ကွာငါ့ထံမှငါဘဝမှာဘယ်တော့မှရှိသည်လှပသောမြို့သောမြို့ဒီရေးသားခြင်းငါလာသောအခါ? အဘယ်ကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုငါလုံးဝနီးပါးဤမြို့ကိုနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားကြောင်းသိရန်အံ့သြမည်ဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။ ငါမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဒူဘိုင်း၏စည်းစိမ်ချမ်းသာ, ဖွံ့ဖြိုးရေးအရာအားလုံးကိုမြင်လျှင်ပါပြီ။ ဤမျှလောက်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နယ်ပယ်များတွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်သူတို့ဤမြို့ကိုများအတွက်ကောင်းဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလူတွေကိုတောင်းဆိုနေတာ။ ငါသည်မြို့တစ်တစ်ချက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်ဒီနှစ်အဘို့အကြှနျုပျ၏ကဒ်အတွက်င့်ရှေ့တော်၌ထိုအနီးအနာဂတ်အတွက် ပို. ပို. ရေးသားဖို့ကိုချစ်မယ်လို့ငါသြဂုတ်လသို့မဟုတ်စက်တင်ဘာလယခုနှစ်ကာလအတွင်းအချိန်မရွေးလှပတဲ့မြို့တက်ဆင်းသက်စေနိုင်သည်။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်ငါ့ကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအထောက်အကူပြုနှင့်မည်သည့်ပုံစံအတွက်အကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုထွက်ရောက်ရှိပါစေကြကုန်အံ့။ ဤအတူငါကလူ 30 မိနစ် 30 ရက်ပေါင်းစိန်ခေါ်မှုအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏။ ကျနော်ကျိန်းသေဤဖြစ်ရပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောပြောင်းလဲမှုငါ၏အပါဝင်မှုအိန္ဒိယထဲကနေပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးအဆုံး၌, ပါဝင်မှုအရပျကိုထက်ငါ့ကိုပိုအရေးကြီးပါသည်။ ဒီစီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်ကွပ်မျက်ခံရလျက်ရှိသည်လျှင်ဒီတစ်ခါလည်းငါနှင့်အတူအချို့သောလူတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။
အားဖြင့် Written အပိုဒ်, Pranati ဟန်
ခရီးသည်ဒူဘိုင်းက Metro အပေါ်နေတုန်းလုပ်မနေသင့် 12 ဘုံအမှားတွေကို
ဇြန္လ 20, 2019